Hondo Yepasirese: Graphic Update | Linux Addicts
Hondo Yepasirese: Graphic Update
Isaac | 26/04/2022 12:43 | Linux Mitambo, chiutsi
War for the Overworld Iine update inovandudza magirafu nenzira iri pachena. Zvakare, ikozvino wave nayo pamutengo wakaderera, saka kana wanga usati watove nayo, iwo mukana wegoridhe. Zvakare, kana iwe uri nostalgic ye "zvinoshamisa" zano mitambo uye inodiwa Muchengeti wejeri, iyi yakafemerwa nazvo, uye ichakuyeuchidza zvakawanda nezvezita iro kubva makumi emakore apfuura.
The War for the Overworld update yave kushamisika, sezvo mutambo wakambomira zvishoma. Nekudaro, imwe yenhengo dzayo yaida kuramba yakabatirira pazita uye kuburitsa iyi inonakidza yekuvandudza makore mushure mekuburitswa kwayo.
Pakati pekuvandudzwa kwaisanganisira, kuwedzera kwe mumvuri munguva chaiyo, kuvandudza zvakanyanya chikamu chemutambo. Kune rumwe rutivi, kudzokororwa kwenzwi rekuona kwakaitwawo, kupa kunzwa kukuru kwokuva pasi pevhu. Mamwe matweaks emumvuri akawedzerwawo, uye mamwe magadzirirwo ekuita kuti ive shoma sosi yakasimba.
Mugadziri wacho akati akaona kudzikiswa kwakakosha kusvika pa41,8% mumamenu makuru epamusoro mumabvunzo ekuita kwaaiita, pamwe ne 5000% kuwedzera kwekuita mune zvimwe zvikamu zveiyo interface. Semuenzaniso, maererano nemugadziri uyu, iyo unit panel ikozvino inotora chete 0.1ms kupa kubva pa5ms.
Uye kana zvose zvichiita sezvidiki kwauri, yeuka kuti ndezvemahara. Wedzera kuti inonakidza uye yakasiyana sei mutambo uyu unofananidzwa nemimwe mitambo yemaitiro akafanana, uye kuti yakavandudza magirafu. Chokwadi ndechekuti zita iri raita kuti ndinyanye kufara, sezvo ndaisariziva uye ndine ndangariro dzakanaka dzenguva yandairidza. Muchengeti wejeri...
Rumwe ruzivo uye kurodha Hondo yeOverworld -Steam saiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Hondo Yepasirese: Graphic Update
Neraki iwe wakaisa chinongedzo kumutambo uye zvese, maunogona kunyatso koshesa kuti haisi yemahara, sezvo iwe uchiti ndiyo, ikozvino iri kutengeswa kwenguva shoma ye4 euros pasina, asi gare gare inova yakakosha. 30 euros, izvo hazvisi zvemahara.
LineageOS 19 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo